'लकडाउन नै अन्तिम विकल्प'
बाढीका कारण भियतनाममा १३ जनाको मृत्यु
हनोइ । भियतनाममा यसैसाता आएको भारी वर्षा र त्यसपछिको बाढीमा परी कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । देशको मध्य भूभागमा आएको बाढीका कारण ठूलो भौतिक क्षति पुगेको भियतनामको प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण समितिले जानकारी दिएको छ । मध्य भियतनामका पाँच ओटा प्रान्तमा बाढीले १४ जना व्यक्तिलाई बगाएर लगेको र तीमध्ये १३ जनाको शव भेटिएको तथा एकजना अझै बेपत्ता रहेको समितिले जनाएको छ ।
सात वर्षीया बालिका, जसले गरिन् आफ्नै बाबुविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी !
नयाँदिल्ली । भारतमा एक सात वर्षीया बालिकाले आफ्ना बुवाविरुद्ध उजुरी गरेकी छन् । बुवाले शौचालय बनाउने वाचा पूरा नगरेको भन्दै उनले उजुरी गरेकी हुन् ।
जकार्ता । इन्डोनेसियाली सेनाले आत्मसमर्पण गर्न गरेको आग्रहलाई पृथकतावादी पपुआ विद्रोही समूहले बुधबार अस्वीकार गरेको छ । पपुआ विद्रोहीले गत साता निर्माण कार्यमा संलग्न कम्तीमा १६ जना कामदारको नृशंस हत्या गरेका थिए ।
ह्वावेकी कार्यकारीको मुद्दामा ट्रम्पले हस्तक्षेप गर्न सक्ने
एजेन्सी । मिडिया रिपोर्टका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध थप खस्कन नदिन आफूले ह्वावेकी वित्तीय कार्यकारी मङ्ग वान्जूको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्।
भारतमा भएको विधान सभाको चुनावमा कुन पार्टीले कति सिट जिते ?
एजेन्सी । भारतमा सम्पन्न पाँचवटा राज्यको विधानसभा चुनावको मतगणना सकिएको छ । मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगढ, तेलंगाना, मिजोरममा सम्पन्न उक्त चुनावलाई आगामी २०१९ मा हुने लोकसभा चुनावको सेमिफाइनलको रुपमा हेरिएको छ ।
न्यूयोर्क, अमेरिका । टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी अरबको महाबाणिज्य दूताबासमा अक्टोबरमा हत्या गरिएका साउदी पत्रकार जमाल खसोग्गीलाई अमेरिकी पत्रिका ‘टाइम’ ले ‘बर्ष व्यक्तिव’ को उपाधि दिने मङ्गलबार घोषणा गरेको छ ।